YEMEN: Dibadbax looga soo horjeedo duqeynta Sacuudiga oo ka dhacay Sanca - Hablaha Media Network
YEMEN: Dibadbax looga soo horjeedo duqeynta Sacuudiga oo ka dhacay Sanca
HMN:- Magaalada Sanca ee Yemen waxaa ka dhacay dibad bax ballaaran oo looga soo horjeedo duqeynta dalkaa ay ka wado dawlada Sacuudiga iyo xulufadeeda.
Kumanaan qof oo mudaaharaadeyaal ah ayaa isugu soo baxay Sanca si ay dareenkooda u muujiyaan inay kasoo horjeedaan duqeynta aan naxariista lahayn ee arxan darrada ah ee dawlada Sacuudiga iyo xulufadeedu dalkaa ka wadaan.
Sida muuqatay dibadbaxeyaashaa ayaa aanan la oran karin waxay taabacsan yihiin fallaagada xuutiyiinta balse waxay u muuqataa inay u adkaysan la’ yihiin duqeyntaa taasoo dad badan oo rayid ah naftooda galaafatay.
Xuutiyiinta ayaa ahaa boqolkiiba inta ay yihiin markii la eego dalkaa dadkiisa dad aad u yar laakiin warbaahinta qaarkeed ayaad moodaa inay buunbuunisay oo tiradooda iyo tayadoodaba laga badbadiyay!
Intii dibadbaxu socday oo diyaaradaha xulafadu duqeyn ka geysteen meel ku dhow qasriga madaxtooyada ee dalkaa ayaa cabsiyi gashay dadkii oo ayagu jaanta hal mar rogay.
Waxaase hubaal ah in shacabka aysan u rooneyn duqeynta iyo xuutiyiinta intaba maadaama QM ay haatan sheegeyso in tobanaan kun ay ku naf waayeen duqeynta iyo dagaalada dalkaa kasocda dad badana ay ku bara kaceen.